बिहान खाली पेट ग्रीन टी पिउनु कति लाभदायक? – Health Post Nepal
बिहान खाली पेट ग्रीन टी पिउनु कति लाभदायक?
२०७७ माघ २८ गते ८:११
स्वास्थ्यका लागि ग्रीन टी निकै लाभदायक हुन्छ। वेटलस ड्रिङ्कको नाम लिँदा यसमा सबैभन्दा पहिले ग्रीन टी नै आउँछ। तौल घटाउनदेखि ब्लड सुगर नियन्त्रण गर्न ग्रीन टीले भूमिका खेल्छ। यसले पाचनप्रणालीमा समेत सुधार ल्याउँछ। ग्रिन टी पिउँदा कोलेस्ट्रोलसमेत घट्छ।
ग्रीन टीका थुप्रै फाइदा छन्। एक दिनमा दुई पटकसम्म ग्रीन टी पिएर स्वास्थ्य लाभ लिन सकिने विशेषज्ञ बताउँछन्।
केही मानिसलाई ग्रीन टी निकै मनपर्छ। उनीहरूले दिनको सुरुवात नै यही पिएर गर्छन्। बिहान खाली पेट ग्रीन टी पिउनु स्वास्थ्यका लागि कति लाभदायक छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। खाली पेट ग्रीन टी पिउनु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुनसक्छ।
ग्रीन टीमा टेनिन हुन्छ। जसले पेटमा एसिड बढाउँछ। पेटमा अत्याधिक एसिड हुँदा आत्तिने वा बान्ता हुने जस्ता समस्या हुनसक्छन्। खाली पेटमा ग्रीन टी पिउनु कब्जियतको समस्या हुनसक्छ। त्यसैले ग्रिन टीलाई खाली पेटमा पिउनु हुँदैन।
ग्रिन टीलाई सधै खानाको बिचमा वा खाना खाइसकेपछि खानुपर्छ। पेस्टिक अल्सर ग्रस्त व्यक्तिका लागि ग्रीन टी राम्रो मानिदैन। यस्तै चिन्ताग्रस्त व्यक्तिले पनि ग्रीन टीको सेवन गर्नु राम्रो मानिदैन।
जब हामी खाली पेट चिया पिउँछौं यसमा हुने यौगिकले शरीर र रगतलाई प्रभावित गर्छ। त्यसैले बिहानै ग्रीन टी पिउँदा यसको साथमा केही खानेकुरा खानुपर्छ। यसले शरीरमा रहेको प्रोटिनलाई कम गर्छ।
खाली पेट यसको सेवन गर्दा अल्सर तथा हाइपर एसिडिटीको जोखिम हुन्छ। त्यसैले सधै खाली पेट यो पिउनु हुँदैन।